I-China WIK9070 ivili levili yomvelisi kunye noMthengisi | UWilk
WIK Indawo yokuthengisa engama-9070
Injini yohlobo oludumileyo yasekhaya inamandla amakhulu kwaye iyahlangabezana neemfuno zokusebenza ngokukuko.
Uyilo olungqamene ngqo nolawulo lokonga umbane olwenziweyo lwenza ukuba ukusetyenziswa kombane kungaphantsi.
· Ukusetyenziswa kweefeni ezintsha zokupholisa kunye nezithethi ezinkulu ezenza ingxolo kumatshini ezantsi;
· Sebenzisa ubuchwepheshe obuphambili be-turbocharging ukuphucula ukomelela komatshini kwiithafa;
Isigqubuthelo sefani esimile okwefaneli sonyusa kakhulu ukungenisa komoya kwenjini kunye nenkqubo yenkqubo yokuhambisa ubushushu, ukuqinisekisa ukusebenza okuqhubekayo nokusebenza kakuhle komatshini.
· Inkqubo yeHydraulic ehamba phambili
Uqwalaselo oluphezulu: Impompo ephambili, ivalve ephambili, iimoto ezijikelezayo, iimoto ezihambayo, isilinda, ivalve yokuqhuba kunye nezinye izinto ziimpawu ezaziwayo kwilizwe liphela ukuqinisekisa umgangatho wemveliso.
Ukudibanisa iziphumo zophando zamva nje, ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla, ukuphucula uyilo, nokuphendula ngokukhawuleza.
· Ukulawula ukujikeleza ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo: Ukuphucula ukungcangcazela kweempawu zokuqinisekisa ukuba isenzo sokumisa ukujikeleza sichanekile kwaye sizinzile; ngokunyusa indawo yokugcina itorque, umatshini ubonelela ngokujikeleza okunamandla ngakumbi;
· Isilinda esinomsebenzi osebenza kakuhle: isilinda esibukhali kunye nesilinda esincamathelayo, isilinda sebhakethi siyilelwe nge-buffer, enokunciphisa ukungcangcazela komatshini kunye nefuthe, ukunciphisa ingxolo nokwandisa ubomi besilinda
· Itekhnoloji yokuhlangana kwempompo kabini: yonyusa inqanaba lokuhamba kwevalvu ephambili kwisilinda ngasinye se-boom, intonga kunye nebhakethi ukwandisa isantya sokusebenza.
Ukurhabaxa nokuhlala ixesha elide ukuthembeka okuphezulu
Isinyithi esisinyanzelekileyo, amandla ombane ohamba ngesanti kubunzulu baphantsi, ivili yokunciphisa ivili, ukuphucula ubhetyebhetye kunye nokuqina komatshini.
Iindawo ezibalulekileyo ezichaziweyo zentonga zamkela ulwakhiwo, olunokuphelisa uxinzelelo kunye nokuphucula ukuhlala ixesha elide ngokutshintsha ubume kunye nobukhulu bepleyiti.
I-boom idityaniswe ngokudibeneyo kwaye yenziwa, kwaye ekugqibeleni umatshini okruqulayo uyadika, kwaye i-oxane iyaqhubekeka, enokuqinisa ukomelela kwengalo ezinkulu nezincinci, ukwandisa ubomi benkonzo yepini kunye nomkhono, ngaloo ndlela kuthintelwe ukuwelda Ukophuka kwindawo ye-welding, kwaye ihlala ixesha elide.
· Amacwecwe okusika amabhakethi onke enziwe ngeepleyiti zentsimbi ezinganyangekiyo, ezifanelekileyo kwimisebenzi enzima, kwaye ixhotyiswe ngamazinyo eebhakethi anganyangekiyo kunye namazinyo asecaleni ukuphucula ukusebenza komatshini.
Sebenzisa iipleyiti zensimbi ejiyileyo kunye nokongeza amacwecwe okuqinisa kwicala ukuphucula ukunganyameki;
· Usebenzisa ipheyile elisezantsi elisicaba, umphezulu wokucheba ucocekile kwaye ucabalele xa ulungelelanisa.
Yandisa intsimi yombono macala onke, wandise ifestile engaphambili, iwindow esecaleni kunye nefestile engasemva ukuqinisekisa indawo ebanzi yombono, ukunciphisa kakhulu amabala angaboniyo, kwaye usebenze ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo.
Yandisa isibane esibhakabhakeni ukuphucula ukubonakala okuphezulu nokwandisa umoya. Iglasi ecinyiweyo isetyenziselwa iingcango kunye neefestile ukuthintela ukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo;
Lonke ulawulo lomsebenzi luyilelwe kwaye lacwangciswa ngokwethiyori ye-ergonomics.
Isiphatho sokusebenza kulula ukusilawula.
Ikhabhathi epakishwe ngaphakathi, ipaneli yokubonisa yeLCD, izihlalo zodidi.
· Fakela umoya opholileyo nomoya ofudumeleyo ukuqinisekisa ukufudumeza nokupholisa ngaphakathi endlwini ngokukhawuleza
Umsebenzi okrelekrele kunye nokubonisa
· Umsebenzi we-LCD wokujonga kunye nesikrini esikhulu, umboniso wedijithali, ukubeka esweni ngokubanzi imeko yokusebenza kweinjini (isantya sokujikeleza, ubushushu bamanzi, uxinzelelo lweoyile, njlnjl.), Ulwazi ngeendlela ezahlukeneyo zomatshini zinokubuzwa nangaliphi na ixesha.
Umsebenzi wotshintsho ucwangciswe embindini kwipaneli yokulawula kwaye unokukhethwa ngokulula ngamaqhosha okuchukumisa.
· Sebenzisa inkqubo yokuma kwe-satellite satellite, ukuxilonga kude, isilumkiso esingalunganga, ulondolozo kunye nesikhumbuzi esizenzekelayo.
Ukulungiswa okulula nokukhawulezayo nolondolozo ,,,,,,,,,,,,
Isihluzi seoyile, icebo lokucoca ulwelo lweoyile, isihluzi seoyile yeoyile, kunye nokwahlula amanzi ngeoyile kufakwa kwiindawo ezinokudityaniswa emhlabeni ukuze kuhlolwe kwaye kutshintshwe.
· Itanki enkulu yamafutha yokusebenza ixesha elide.
· Iibhokisi ezinkulu zeethuluzi zilungele ukugcinwa kwezinto ezizezinye.
Ukulungiswa kwexesha elide kunye nomjikelo wolondolozo: khetha iindawo ezikumgangatho ophezulu kunye nezinto zokunyusa ubomi kunye nokunciphisa ixesha lokugcina umatshini.
WIK Ixabiso lama-9070 lamaxabiso
Umzekelo: I-WIK9070 Wheel Excavator
Umthamo we-Scoop (m³: 0.21
Isantya sokujika (RMP): 0-12
Ithambeka eliphezulu lokunyuka (°: 25
Ubuninzi bokumba ibhakethi (KN): 45
Amandla amakhulu okumba intonga (KN): 36
Amandla / isantya (KW / rmp): 62.5 / 2200
Uxinzelelo lwenkqubo (MPa): 20
Ubuninzi bokumba ubude (mm): 6245
Ukuphakama okuphezulu kokukothula: 4630
Ubunzulu bokumba (mm): 3820
Ubunzulu bokumba ngokuthe nkqo (mm): 2700
Ubuninzi bemba irediyasi (mm): 6360
Ubuncinci be radius yokujika (mm): 2450
Ubuninzi bokususa umhlaba kugandaganda:（mm）: 310
Ubunzulu bokutshona kwebhodi ye-bulldozing (mm): 130
Imilinganiselo iyonke ubude * ububanzi * ukuphakama (mm): 6300 * 2205 * 2850
Ukuphakama kweCab (mm): 2850
Iivili (mm): 2400
Isondo (umkhondo) umgama (mm): 1675
Ukucoca umhlaba ubuncinci (mm): 260
Radius yomsila gyration (mm): 1940
Abembi bamavili kulula ukuhambisa. Zisetyenziselwa iiprojekthi ezincinci esixekweni kwaye zisetyenziselwa ulawulo lukamasipala. Musa ukusebenza kwiindawo ezithambileyo. Uhlobo lwevili ngokubanzi lusebenza kumhlaba wesamente kunye nengca, kwaye ngokubanzi ayonakalisi umphezulu wendlela. Ukulandelela sisixhobo seprojekthi, esinokuyityumza umphezulu wendlela. Eyona njongo iphambili yezinto zokugrumba ezinamavili ayizizo ezo zirhubuluzayo. Ukusetyenziswa kwezimbiwa ezinamavili kuyachaphazeleka kwindalo kwaye kunemiqobo ethile. Inokwenza kuphela umsebenzi omncinci. Abembi abakhasayo banokuziqhelanisa nawo nawuphina umsebenzi okanye imeko-bume.
I-Wheel excavator ngumatshini wokugrumba onamavili njengenxalenye yokuhamba, ekubhekiswa kuyo njengesixhobo sokukhupha ivili. Ukumba ivili kunesantya sokuhamba esikhawulezayo, alonakalisi umphezulu wendlela, linokudlulisela ngokwalo kumgama omde, kwaye linokutshintsha ngokukhawuleza izixhobo ezahlukeneyo zokusebenza. Esona santya siphezulu sokuhamba kwabavili bamazwe angaphandle ubukhulu becala ngama-25-40km / h, kwaye uninzi lwasekhaya ngama-20-35km / h. Nangona ukusebenza ngokukumba kwamavili akulunganga njengokwemba abakhasi bebanga, xa kuthelekiswa nomrhumo wokudlulisa obiza kakhulu wokumba, ukumba ivili kuneengenelo zoqoqosho ngakumbi xa utshintsha iisayithi rhoqo. Ngokuchanekileyo kungenxa yeempawu zayo ezahlukileyo zokuhamba, ubhetyebhetye, kunye nokusebenza kakuhle ukuba ukumba ivili kuye kwasetyenziswa kakhulu ekwembeni nasekususeni izinto ezinje ngeeprojekthi zolondolozo zikamasipala, ulwakhiwo lwezothutho lwendlela kunye nokulungiswa okukhawulezayo.
Esona sakhiwo siphambili sokumba ivili lesanti kubunzulu baphantsi senziwe sisixhobo esisebenzayo, ikhabhathi, indlela yokusika, isixhobo samandla, indlela yokuhambisa ugqithiso, isisu semoto kunye nezixhobo ezincedisayo. Phakathi kwazo, ikhabhathi, iyunithi yamandla, kunye nezixhobo ezincedisayo zonke zifakwe kwiqonga eligcweleyo, eliqhele ukubizwa ngokuba kukuphakama okuphezulu. I-chassis yamatayara yenziwe sisakhelo, inkxaso, ibhokisi yezixhobo, i-hydraulic motor, ii-asi zangaphambili nangasemva, amavili, njl njl, kwaye zidityaniswe nomzimba ojikelezayo. Isixhobo esisebenza ikakhulu senziwe nge-boom, intonga, ibhakethi, intonga yokudibanisa kunye nezinye iindawo. Ngokwendlela esebenza ngayo, ipheyile lineendlela ezahlukeneyo ezifana nomhlakulo ongaphambili, umva, urhuqo kunye nefosholo. I-boom ikakhulu ine-gooseneck yokudityaniswa okuguqulweyo kunye ne-hydraulic split multi-section boom. Ukuphakama kwamacandelo amaninzi ebhakethi le-backhoe kusetyenziswa kakhulu kwiimveliso ezifanayo zangaphandle.
Egqithileyo WIK9085 Isondo Excavator
Okulandelayo: WIK9088 Isondo Excavator